Global Voices teny Malagasy » Fahitalavi-Pirenena Aostraliana: Mandefa Bitsika Vetaveta Momba Ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Aogositra 2015 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rennie Nandika avylavitra
Sokajy: Oseania, Aostralia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Pikantsary natolotr'i @kobijv (Kobi J A VanBennekom ), mpampiasaTwitter
Tahàka ny hoe tsy misy andro iray tsy itodihan'ny kiana sy ny mason'ny media any amin'ny Praiminisitra Aostraliana, Tony Abbott (@TonyAbbottMHR ). Ny resabe farany indrindra izao dia samy nahasaringotra ny media rehetra, na ny tranainy na ny vaovao.
Niala tsiny n y “Australian Broadcasting Corporation (ABC)” an'ny fanjakana noho ny namelàny ireo teny ‘AbbottLovesAnal’ (TiaVodyiAbbott) hivoaka tao amin'ny fahitalavitra  nandritry ilay fandaharana iray Fanontaniana&Valiny be mpijery tokoa, izay fotoana hamalian'ireo olona manana ny toerany ny fanontaniana apetraky ny mpanatrika/mpijery. Bitsika avy amin'ny Twitter ilay fehezantany ‘nanafintohina'; ilay fandaharana, izay alefa mivantana, dia mampiseho mivantana eo amin'ny efijery ireo bitsika avy amin'ny mpijery mandray anjara amin'ny alàlan'ny tenifototra #qanda.
Mivaky toy izao ilay bitsika :
Aleoko andiana bitsika alefan'ny olona momba ny toebatan-dry zareo #qanda
Tao amin'ny Mashable Australia , nohazavain'i Jenni Ryall (@jennijenni ), tonian-dahasoratra, fa fanindroany izao tamin'ity taona ity ilay fandaharana Fanontaniana&Valiny an'ny ABC TV no nanafintohina ny PM.
Tamin'ny Jona, niharan'ny kiana mahery vaika ilay fandaharna noho ny fisian'i Zaky Mallah, olona miteraka resabe, tao anatin'ireo mpanatrika. Nolazainy tamin'ireo vahiny nasaina fa ny politisiana no nahatonga ireo Aostraliana nandeha nanatevina laharana ny Fanjakana Islamika.
Tamin'ny 2003, nenjehina araka ny lalàna Aostraliana hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana i Mallah, saingy tsy voaheloka. Ny voalohany tamin'ireny dia ny fanontaniana napetrak'i Mallah tamin'ny sekretera parlemantera iray (minisitra zandriny) momba ny raharaha nanenjehana azy. Ny Jona 2015 dia nanontany i Abbott Praiminisitra hoe “Aiza no toerana misy ny ABC? ” nampiany hoe “hisy loha ho tapaka” satria ny ABC namerina nandefa ilay fandaharana tsy nasiana sivana.
Tsy mampino hoe be mpanaraka tao Aos ny #TiaVodyiAbbott . Tsy ampy ve ny fifandirana amin'ny #qanda  no ampiana #analgate  indray
Namaly ny fahadisoam-pamindra farany nataon'ny ABC ny tontolon'ny Twitter, tamin'ny fampiasàna tenifototra maro tahàka ny : #AbbottLovesAnal , #QandA  (avy amin'ny mpandika: raiso hoe Queue -Rambo, sy Anal -Vody) na fotsiny fikarohana ny ‘Q&A ‘ . Ity fanehoankevitra iray ity no mahafehy tsara ny tabataba tao amin'ny Twitter:
#AbbottLovesAnal  Tsy manan-kambara aho fa dia tiako hitohy horesahana be fotsiny ity.
Lasa lavitra kokoa noho ity lahatsoratra ity aza ny fanadihadiana iray miditra amin'ny antsipirihany, ka dia entanina ianao araka izany, tsidiho ny rohy.
Nandritra izany fotoana izany dia nesorina ilay kaonty Twitter nanafintohina. Hatreto dia tsy mazava na nanivan-tena ilay tompon'ny kaonty na hetsika avy amin'ny Twitter mihitsy no nitranga.
Toa nahazo lesona politika  ny fitantanana ao amin'ny ABC, avy amin'ireo resabe tany ampiandohana. Tsy nanaisotra ilay bitsika izy tamin'ny famerenana nandefa ilay fandaharana, na tamin'ny dika napetraka ety anaty aterineto ao amin'ny iview , fa fotsiny norakofany mainty ny votoatin'ilay bitsika.
Ny tranonkala mpananihany The Shovel  no nanompiseho taratra ny zava-nitranga tao amin'ny “realpolitik” saingy nihanihany momba ny eritreritra hiezaka hanakombona ny vavan'ny media:
Taorian'ny antso an-telefaona tsy nanaovana teny betsaka avy amin'i Malcolm Turnbull, minisitry ny Fifandraisana, nanaiky ny hanaisotra ilay bitsika nanafintohina tsy ho hita ao anatin'ny famereana ilay ampaham-pandaharana ny ABC, mba hiantohana ny hoe ireo olona izay nijery ny fandaharana nalefa nivantana ihany no ho hany olona nahita ilay bitsika.“Heveriko fa noho ny hetsika haingana nataonay dia vitanay ny nanakana azy io tsy hihitatra lavitra,” hoy ny mpitondra tenin'ny governemanta.
Raha marina ilay fiteny taloha hoe tsara daholo rehefa mety ho dokambarotra, dia mety handresy mora foana ny governemanta Abbott amin'ny fifidianana manaraka eo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/26/73478/
 Niala tsiny n: http://www.news.com.au/entertainment/tv/qa-recap-twitter-sexism-the-lack-of-narrative-from-both-political-parties-and-women-in-politics/story-e6frfmyi-1227497310935
 hivoaka tao amin'ny fahitalavitra: http://www.startsatsixty.com.au/current-affairs/has-qa-signed-its-own-death-certificate
 Aiza no toerana misy ny ABC?: https://en.wikipedia.org/wiki/Q%26A_(Australian_talk_show)#Zaky_Mallah_incident
 namerina nandefa ilay fandaharana : http://www.skynews.com.au/news/top-stories/2015/06/25/-heads-should-roll--at-abc-over-q-and-a-rerun.html
 lesona politika: http://evednews.com/abc-chief-mark-scott-apologises-to-tony-abbott-over-crude-tweet-on-qa.html